पुस्तक चर्चा : ‘गिभिङ’ अर्थात् हामीले कसरी संसार बदल्न सक्छौँ ? ः एक दृष्टि – Chitwan Post
पुस्तक चर्चा : ‘गिभिङ’ अर्थात् हामीले कसरी संसार बदल्न सक्छौँ ? ः एक दृष्टि
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ५, २०७०
[author image=”https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-frc1/c5.0.170.170/s160x160/311224_2220916835556_1569667287_a.jpg” ]डा. हरिप्रसाद कँडेल (लेखक, नेपाल शिक्षक संघ चितवनका उपाध्यक्ष हुन् ।) [/author]
शरीर त एक दिन मर्नुछ, ढुङ्गामाटोमा मिल्नुछ
गरौँ मनलाई फूलजस्तै, पूर्णिमाको जुनजस्तै
सके सबैको भलो सोचौँ, कुभलो कहिल्यै नसोचौँ
नदिनु दुःख कसैलाई, धनी–गरिब दुवैलाई ।
माथिका हरफहरु मन्दिप गुरूङले जनवरी २०१० को हाइटीको महाभूकम्पको कारुणिक दृश्यावलोकनयुक्त वृत्तचित्रमा गाएका मधुर तथा कर्णप्रिय स्वरका लयहरु हुन् । गिलामेसको सुमेरियन महाकाव्य इसापूर्व २१०० मा तयार भएको संसारको पुरानो साहित्य हो भन्ने कुराले यो विज्ञानभन्दा जेठो हो भन्ने आधार छ कि कहीँ । ल्याटिन भाषाको पत्रको बहुवचन लिटरेचर भन्ने शाब्दिक अर्थले सुरूमा चिठीपत्रहरुबाट साहित्य विकास भएको थियो होला भन्ने अनुमान लगाउन पुगेको छु । खैर, यो विषय म स्वनामधन्य साहित्यकारहरुलाई छोड्न चाहन्छु, आज ।
भाषा र साहित्य क्षेत्रजति व्यापक सायदै अरु केही होला । मैले थोरै समयमा केही लेख्ने त कोसिस गरेँ, तर मेरो लेखाइ कुन विधाभित्र रहन पर्ने थियो भनेर कहिल्यै सोचिनँ यसअघि । गणित र व्यवस्थापन विषयको अध्यापक म, मैले नेपाली र अंग्रेजी विषयका प्राध्यापकहरुलाई यो क्षेत्र सजिलो हुने ठान्दथे सधैँ । केही सहकर्मीहरु, जो नेपाली र अंग्रेजी भाषाकर्मी नभइकन पनि साहित्यमा सक्रिय भएको देख्दा ठान्दथेँ कि यो क्षेत्र ज्यादै फराकिलो र लचिलो पनि रहेछ भन्ने ।
आज म बहुचर्चित किताब ‘गिभिङ’का सम्बन्धमा केही लेख्दै साहित्यका क्षेत्रमा बहकिने कोसिस गर्दैछु । मलाई लाग्दैन, साहित्य काल्पनिक मात्र हुनुपर्दछ वा हुन्छन् । ‘गिभिङ’ एउटा काल्पनिकभन्दा वास्तविक तथ्यसँग सम्बन्धित रहेको पाएँ । समयको मूल्य कस्तो हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट पाएँ । अरुका लागि समर्पित जीवन सबैभन्दा सुखद, महिमामयी र सन्तुष्ट रहने दृष्टान्त पनि पाएँ । लेख्नकै लागि पुस्तक पढेँ, त्यसैले अलिक बढी पनि पढेँ । मैले गर्ने काम जो कोहीले गर्छ, गरिरहेको पनि छ । पुस्तक मसँग थिएन, तर मन भए हुँदोरहेछ । अनलाइनको गुड रिडर्स वेबसाइटबाट पुस्तक पढ्नु पक्कै मेरा लागि नयाँ अनुभव रहेको छ । कज एण्ड इफेक्टस्वरुप विशेषगरी चितवन पोष्टका स्रष्टा व्यक्तित्व सङ्गीत आयामबाट प्राप्त प्रेरणालाई यो लेखको कारक मानेको छु । पुस्तक समीक्षा अरुलाई किताबका लागि प्रेरित गर्नका लागि नभएर कान्तिपुर पत्रिकामार्फत नेपालमा हुन लागेका गिभिङ अभियानलाई स्यालुट गर्दै हालसालै असार २ गतेको बाढीले पश्चिम नेपालको दार्चुलालगायतका स्थानमा पु¥याएको क्षति र त्यसले ल्याएको दीर्घकालीन मानवीय समस्यामा हामी नेपालीले यथाशक्य सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्यको सन्र्दभलाई जोड्ने प्रयास मात्र गरेको हुँ ।
दुई कार्यकाल बिताएका सफल र लोकप्रिय ४२औँ अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले पछिल्लो कार्यकालको अन्त्यतिर अर्थात् सन् २००७ मा यो पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए, जसको हार्ड कभरको वर्तमान बजार मूल्य यु एस डलर २४.९५ रहेको छ । २५६ पेजको यो पुस्तक अल्फ्रेड ए नोफ पव्लिकेसन ग्रुपले प्रकाशन गरेको र अमेजन प्रकाशनले बिक्रीमा ल्याएको छ । सुरूमै ७,५०,००० प्रति प्रकाशित भई त्यसबाट भएको नाफाको एक करोड डलर उनले त्यही बेला नै दान गरेका थिए । यसको डिजिटल अडियो पनि उपलब्ध छ र यो जर्मन पुरस्कारका लागि समेत छनोटमा परेको थियो । भन्नेहरुले आफ्नी श्रीमतीको राजनीतिक मह¤व बढाउन यो पुस्तक लेखेका हुन् भनेर लाञ्छना लगाएको पनि पाइन्छ । तर, अहिले उक्त लाञ्छना झूटो सावित भैसकेको छ । राजनीतिज्ञ भएर पनि गिभिङ, बिटवीन होप एण्ड हिस्ट्री, माई लाइफ, ब्याक टु ओर्क, वियोन्ड ह्वाइट हाउस, माई लाइफ इन प्रेसिडेन्सिएल इयरजस्ता विश्वचर्चित पुस्तक लेखनले क्लिन्टन बहुप्रतिभाशाली छन् भन्ने पनि सहजै प्रमाणित गरिदिएको छ ।
म ह्वाइट हाउस छाड्दै छु । मेरो पैसा र मेरो जीवनको बाँकी समय फरक र सार्थक प्रयासमार्फत अरुहरुका लागि दिन चाहन्छु भन्ने उद्घोषसहित क्लिन्टन फाउन्डेसनमार्फत गिभिङ अभियानमा रहेका क्लिन्टनले साँचो अर्थमा संसार बदल्ने साहस गरेका कथाहरुले किताब भरिएको छ । किताबमा अमेरिकी भौतिक संसार अनि अफ्रिकी तथा तेस्रो गरिब मुलुकहरुमा देखिएको कारुणिक मानव जगतबीचको अन्तरसम्बोधन वर्तमान विश्वको चुनौती रहेको प्रस्ट्याइएको मात्र छैन, उनको गिभिङ अभियानबाट उलेख्य सुधारहरु हुन थालेको तथ्य पनि उजागार भएको पाइन्छ । तपाईं हामी प्रत्येक मान्छे हुनेले नहुनेका लागि वस्तु, पैसा, समय र कौशलता प्रदान गरेर संसार परिवर्तन गर्न अग्रसर हौँ भन्ने अभियान नै क्लिन्टनको किताबको सार रहेको छ । किताब परोपकार र दान अर्थात् सामाजिक विज्ञानसँग सम्बन्धित रहेको छ ।
मार्टिन लुथरले भनेझैँ हरकोही कसैको सेवा गर्न सक्छन्, किनकि हरकोही महान् हुन्छन् । क्लिन्टनको ‘गिभिङ’को सार पनि यही नै हो । पुस्तकमा मेलिन्डा गेट र ६ वर्षीय एमसी स्टेनजीले समुद्री तट सफा गर्न देखाएको साहस र उक्त अभियानमा पैँतीस अरब रूपैँया जम्मा भएको तथ्यले हाम्रो फोहोर र बागमतीको चासो राज्यसँग नभएको कुरालाई कसरी तुलना गर्ने होला ? माइक्रोसफ्टका कर्मचारीले कसरी अरुलाई पढ्ने अवसर सिर्जना गर्न होमिएका छन् र संसारभर त्यो अभियानले साथ पाएको छ भन्ने दृष्टान्त पनि आश्चर्यजनक रहेको छ । यभिना लोम्बार्डले इजरायलको हिप्पी शिक्षामा दिएको सार्थक योगदानले सबैको स्नेह पाएको कुरा पनि बिर्सन नसकिने रहेको छ । गेराल्ड नामक एक ३० वर्षे पूर्वकैदीले नयाँ व्यवसायमार्फत गिभिङ अभियानमा बच्चाका लागि दिएको सहयोगको मात्रा कति अनुकरणीय छ, सोच्न नसकिने छ । प्रसिद्ध टेनिस खेलाडी आन्द्रे अगासीले गिभिङमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा गरेको च्यारिटी पनि अवलोकनीय देखिन्छ । अरब युवा नेताहरुमार्फत मध्यपूर्वमा वैदेशिक निर्भरता घटाउन सघाएको घटना पनि स्मरणीय नै छ । एक जना युवती नर्सले एचआईभीपीडितका लागि जीवन समर्पण गरेको उदाहरण झनै कारुणिक रहेको छ ।
टेलर वसमा बस्ने डा. पाओलले रूवान्डामा गएर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार्न आजीवन लागेको तथ्य अनि एक न्यूयोर्क कपलले अफ्रिकामा पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्रीहरु जुटाउनका लागि गरेको मिहिनेत र जिम्बाबेमा ३५ विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति दिएर छात्रा सङ्ख्या ५ प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत पुग्न गएको अवस्था प्रेरणादायक मात्र छैन, उच्च मानवीय कल्याणको दृष्टान्त बनेको छ । सुपरस्टारदेखि ७५ वर्षीय ओसेला कार्टी नामक धोबिनीले मिसिसिप्पी विश्वविद्यालयमा दिएको १,५०,००० डलरको सहयोगको उत्साहलाई कसरी ग्र्रहण गर्ने हो ? हेफरले अफ्रिकामा एक परिवार एक बाख्राको अभियानबाट ल्याएको आर्थिक सुधारको कसरी मूल्यांकन गर्ने ? धन र शक्तिको असमानताको अवस्थाबाट न्यायसंगत दुनियाँका लागि ‘गिभिङ’ले धेरै जनहरुलाई अन्तरमनबाटै हौसला र साहस भरिदिएको छ । बालबालिकाका लागि सुरक्षा कोष, कम्बोडियाली बच्चाका लागि नयाँ आशा, विश्वका लागि रोटी, स्वास्थ्य शिविरहरु, महिला सशक्तीकरण, एचआईभी निराकरण, विद्यालयहरुको स्थापना, गरिबी निवारण, ग्लोवल वार्मिङ रोकथाम र स्वयंसेवा कार्यक्रमलगायत थुप्रै क्षेत्रमा गिभिङ अभियान सफल भएका कथाहरु पुस्तकभित्र पढ्न पाइन्छ ।
कंगो, जिम्बाबे, ब्रुन्डी, सोमालिया, लाइवेरिया, मलावी, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, इरिटेरा, अफगानिस्तानजस्ता संसारका अति गरिब देशहरुमा गरिब नागरिकहरुको अवस्था नियाल्ने हो भने सबैको मन पग्लन्छ होला । तर, हामीलाई त्यसको चासो लिने फुर्सद पनि छैन र सम्भव पनि हुँदैन । प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध र महागरिबीका कारण मानिसहरुले नारकीय जीवन बाँच्नु परेको व्यथा जसलाई प¥यो उसैलाई मात्र थाहा छ, त्यसको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर । भूकम्प, सुनामी, चक्रवात र बाढीबाट आज संसारका धेरै मानिसहरुको उठीवास भएको छ । भोकमरी तथा पानीको हाहाकार छ, बलात्कार र लुटपाट मच्चिएको छ, एड्स फैलिएको छ, नांगै छन्, वासस्थान छैन, रूवावासी छ अनि कुपोषणले ग्रस्त छन् । मर्न लाएको बालक कतिखेर मर्छ भनेर गिद्धले नजिकै पर्खिरहेको अवस्था कति कारुणिक छ । पानी नपाएर गाईको गहुँत थापेर खाने बालबालिकाको स्थितिलाई हामीले कसरी ग्रहण गर्ने ? आज नेपाल र भारतका बाढीग्रस्त स्थानमा यस्तै मानवीय आर्तनादहरु सुनिँदै छ । अलाप–विलाप गर्दै जीवन खोजिरहेकाहरुलाई सक्दो सहयोग गरौँ, उनीहरुको दुःख बाडौँ र सान्त्वना उपलब्ध गराऔँ । यस्तै बेला अरु चाहिने हो, त्यस कारण ‘गिभिङ’ आवश्यक र अपरिहार्य छ– सभ्य संसारका लागि, न्यायसंगत समाजका लागि अनि मानवताका लागि ।
हामीलाई लाग्ला कि क्लिन्टन अमेरिकी राष्ट्रपति भएकाले संसार बदल्ने आँट गरे, तर हामी त सामान्य मान्छे हौँ । होइन त्यसो, उनी पनि गर्भे टुहुरा नै हुन् । उनी परिवारबाट वातावरण पाउँदै अघि बढेका पनि होइनन् । बरू, १५ वर्षकै उमेरमा स्कुलमार्फत लिटल रक छात्र सरकारमा चुनिएर उनले परिवारको पहिचान फेरिदिएका थिए । जन्मनुभन्दा ३ महिनाअघि मेकानिकल बाबु गुमाएका क्लिन्टनले १५ वर्षमा सौतेला बाबु रोजरलाई पाएका थिए । १५ वर्षको उमेरमै उनी तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीसँग भेट्न सफल भएका थिए । अक्सफोर्डमा अध्ययन गर्न रोड्स छात्रवृत्ति जित्न सफल भए । स्नातकपश्चात् सदनमा कर्मचारी वकिलका रुपमा केही समय काम गरे । सिनेटर चुनिए, अनि दुई पटक शक्तिशाली महामहिम राष्ट्रपति पनि । आज क्लिन्टन फाउन्डेसनमार्फत गिभिङ अभियानमा छन्, गरिबीबाट शक्तिसम्पन्न र फेरि गरिबहरुका लागि जीवन उत्सर्ग गर्दै । क्लिन्टन आफू विभिन्न भूमिकामा मात्र बदलिइरहे र त्यो सधैँ अरुका लागि मात्रै लक्षित रह्यो ।
बीपी स्मृति दिवसको सन्दर्भ
एमाओवादी बैठकः केन्द्रीय समिति मात्र राख्ने प्रस्ताव